Mayelana NATHI | Zibo Taa Metal Technology Co., Ltd.
I-ZIBO TAA METAL TECHNOLOGY CO., LTD ingumkhiqizi oholayo wokuqhumisa ama-abrasives eChina futhi ungomunye wabaphakeli abaphezulu abathathu emhlabeni wonke. Isungulwe ngo-1997, i-TAA inikezwe njengeNational Hi-Tech Enterprise, ephethe isikhungo sokucwaninga ngobuchwepheshe bensimbi kuphela eChina.
Ithembele esikhungweni sokucwaninga, i-TAA iqhubekile ngokuthuthuka nemikhiqizo eminingi ephezulu esebenza kahle kakhulu kumakhasimende, kufaka phakathi: i-low carbon bainite steel shot, low carbon bainite abrasives exubile, insimbi engagqwali cut wire shot, stainless steel grit njll.
Sivame ukukhiqiza imikhiqizo elandela i-SAE ejwayelekile, futhi singakhiqiza ukudla okwenziwe ngokwezifiso kwe-abrasives ngezicelo ezahlukahlukene zamakhasimende, sizuze esikhungweni sethu sokukhiqiza esithuthukile, ubuchwepheshe kanye nohlelo lokulawula ikhwalithi. Imikhiqizo yethu isetshenziselwa ukuqhuma kwesibhamu, ukwelashwa kwendawo kanye nenqubo yokudubula emikhakheni efana nokwakhiwa kwemikhumbi, ubunjiniyela basogwini, izimoto, isakhiwo sensimbi, iziqukathi, ukubhobhoza kwensimbi, i-aerospace, ukusika kwamatshe, njll.
Ngokusebenzisana nenkampani edumile yokwakha imishini yokwelashwa komhlaba-inkampani ye-AGTOS, i-TAA ibuye ikhethekile ekukhiqizeni imishini yokuqhumisa esebenza kahle futhi ehlakaniphile enendawo yokuvikela imvelo, izingxenye ezisele kanye nokuvuselelwa kwemishini, ezibophezele ekuhlinzekweni kwemishini yokwelapha ephezulu futhi izixazululo.
Ekugcineni ikwazile ukubona uchungechunge lomkhakha wokwelashwa okuphezulu kusuka kuma-abrasives wensimbi kuya kumishini yokwelashwa ebusweni kanye nezinsizakalo zokuthola izinkontileka ngokuphelele, futhi njenge- "surface treatment integrated service provider", esiza abasebenzisi ukuthi bathuthukise ukusebenza kahle kokukhiqiza futhi banciphise izindleko zokusebenza ngokunikela ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme kanye nezinsizakalo jikelele .